Funda ukuba ungaseka njani ishishini kwityala leShishini lakho
Iinkampani ezihlanganisiweyo zibonelela ngeenkqubo ezininzi zokwakha ityala lekhampani. Singakunika iindlela zokwahlula ityala lakho kwishishini lakho. Ngenkqubo yethu eyahlukileyo, sinyanzela iminyaka eqhelekileyo ye-4-6 ukuseka ishishini kwaye sifumane ikhredithi phantsi kwe-7 ukuya kwiintsuku ze-14, ukudala iprofayili entsha yekhredithi esekwe kwinombolo yakho ye-ID kunye namandla okukwazi ukufumana isiqinisekiso.
Ukuba ufuna i- $ 20,000 ukuya ku- $ 400,000 okanye ngaphezulu kwikhredithi, tsalela umnxeba okanye ugcwalise le fomu ngasekunene.
Isiqinisekiso sethu: Ukuba ulandela inkqubo yethu kwaye asikufumani ngetyala ayizukubiza isenti.
Fowunela i-1-888-444-4812 ngeenkcukacha
Ukongeza, nge Series LLC, umntu unokuba nenkampani enye kwaye uthotho ngalunye lungasungula iphrofayili ehlukileyo yekhredithi. Oku kunokuphindaphinda isixa setyala umntu anokufumana ngaso ngenani loluhlu akhetha ukulwenza.
Ngemeko yangoku yenkxaso-mali asinazo iinkqubo zalabo abanamanqaku FICO angaphantsi kwe640. Kwabo bantu, buza ngenkqubo yethu yokulungiswa kwamatyala.
Unokuba nayo iprofayili yakho eyenzelwe wena kwaye unikezwe izixhobo kunye nezixhobo zokuseka ikhredithi yeshishini ngokukhawuleza-okanye senzele wonke umsebenzi. Sinikezela ngenkqubo eyi-95% iizandla ezixhasayo, ukuvumela iingcali zamatyala ukuba zisebenze. Jonga zonke iiNkqubo eziManyeneyo zeTyala
Fumana imali ebolekwe kwinkampani-Ukwahlula imali kwikhredithi yakho yeshishini unokubonelela ngezi zibonelelo zilandelayo:
Imigaqo efanelekileyo yokuhlawula (iNet 30 okanye iNet 60)
Amakhadi etyala eshishini
Ukuqeshiswa kwezithuthi ngaphandle kwesiqinisekiso somntu okanye itshekhi yakho
Ukuqala ishishini kunye nokukhula kwemali
Ixabiso eliphantsi, ukubuya okuphezulu
Nje ukuba uQinisekise iZiko eliManyanisiweyo unokufumana:
Imida yokuthenga ngetyala kunye neMibandela yokuhlawula engcono (iNet 30 okanye iNet 60)
Amaxabiso emali ephantsi
Uyakuqala nini ukuseka iTyala leShishini
Icacile kwaye ilula, uyafuna yakha ikhredithi yeshishini ngaphambi kokuba inkampani yakho ilufune! Akukho ziko lifuna ukuboleka imali, iqabane kunye, okanye ukuthemba inkampani engenakho ukubonisa uzinzo kwezemali. Njengomnini-shishini kuya kufuneka uqale ucinge ngokwakha imbali yamatyala emva nje kokufaka. Unokwenza oku ngokufumana inombolo yakho ye-D&B DUNS. Le nkqubo inokwenzeka, nge-Arhente okanye yiNkampani eNqabileyo yoTyala (i-LLC), kunye nokusebenzisa inombolo yakho yesazisi (EIN).
Xa amagosa nabanini besebenzisa iiprofayili zabo zokuthenga ngetyala ukufumana amakhadi okuthenga ngetyala okanye ukufumana amakhadi okuthenga ngetyala kwishishini, babeka emngciphekweni wetyala lobuqu, kunye nokuwenza buthathaka umkhusane ngokudibaniselana nokuthengiselana kwemali. Kukho izizathu ezibini abanini bamashishini abanokuzama ukungazisebenzisi isiqinisekiso kule meko.
Umtyikitya umntu uxanduva lobuqu ukuba ishishini alinakho ukwenza iintlawulo
Ikhredithi efunyenwe yeshishini inokukhokelela ekuthinjweni kwezinto zexabiso lomntu.
Gcina ukhumbula, ukulinganisa ngetyala kwishishini kudityaniswa ngendlela efanayo namanqaku akho etyala. Ziyenziwa zisebenzisa izinto ezininzi, kubandakanya: ityala elikhoyo, inani elikhoyo lekhredithi esetyenzisiweyo, imbali yokuhlawula, imbali yokuhamba kwemali, kunye nezinye izalathi ezininzi zezemali.
Ukufumana imigca yokuthenga ngetyala kwishishini yinkqubo esekwe ngokuhamba kwexesha. Isidala ishishini, iinketho ezininzi ziya kufuneka zakha ityala kunye nokufumana imali mboleko ngaphandle kokusebenzisa iziqinisekiso zobuqu. Ubudala buvumela amashishini amaninzi ukuba abonise ukuthembeka kwawo kunye nokuzinza kwezemali, kodwa oku akufuneki kuthintele amashishini amancinci ekuzameni ukufaka isicelo selayini. Eyona ndlela ilishishini elincinci elinokubonisa ngayo ukuthembeka kwabo kukomeleza ingxelo yabo yamatyala e-D&B.
Yakha iTyala leZiko
Iinkampani eziNgenisiweyo ziye zaqulunqa inkqubo yokubonelela ngeshishini lakho ngezixhobo zokukunceda ukwahlula ishishini kunye nemali yakho. Ngokudala iprofayili entsha yekhredithi esekwe kwinombolo yakho yesazisi.
Konke kuqala ngeyethu Inkqubo yomakhi wetyala, eya kuseka iprofayili entsha yamatyala kunye namanqaku. Injongo kukuseta amanqaku etyala e-75 okanye angcono. Xa kuthelekiswa inqaku le-80 kufana nokuba namanqaku e-800 awenzele awakho amatyala Siqokelele kwaye senza ukuba kufumaneke, iinkqubo zamanqaku etyala kwii-arhente zokunika ingxelo eziphambili.
Amanqaku okuthenga ngetyala akhiwa ngokufumana imigca yamatyala, amakhadi etyala, iiakhawunti kunye nezalathiso zorhwebo ezixela kwi-bureaus yamashishini. Kumashishini amaninzi kunzima kakhulu ukufumana umbolekisi-mali ozimisele ukunikezela uninzi lweendlela zokuthenga ngetyala ngaphandle kwesiqinisekiso somntu ngaphandle kwembali yamatyala yangaphambili yeshishini. Ukuba uneereferensi zakho zorhwebo, siya kusebenza kunye nabo ukwakha amanqaku. Nangona kunjalo uninzi lwamashishini lufuna izingqinisiso ezongeziweyo zorhwebo ezixela kwiiarhente zamatyala eziza kuvula imigca yamatyala kwaye ziqale ukunika ingxelo kwiiarhente eziphambili. Nangona inkqubo ihlala ithatha ixesha elichazwe apha ngasentla, ngamanye amaxesha iinyanga ezine ukuya kwezintandathu ziyafuneka kubathengisi baqinisekise ngokufanelekileyo kwi-arhente yokunika ingxelo.
Sinikezela ngesikhokelo sendlela onokuthi ukhethe ngayo iinkampani eziza kubonelela ishishini lakho ngekhredithi ngokukhawuleza. Inxalenye yale nkqubo kukuncedisa kwisicelo siphela kunye nenkqubo yokunika ingxelo kunye nokukhetha amashishini aza kunika inkampani yakho ishishini. Iinkampani esisebenza nazo ziya kunika ingxelo ngamava okuhlawula kwiziko eligcina imali mboleko-kwaye zibonelele ngemboleko-mali ngaphandle kwesiqinisekiso somntu okanye imfuneko yokutshekishwa kwetyala lakho.
Iinkampani zizimisele ukukhupha ikhredithi kuba abaxumi bayo abathathelwa ingqalelo njengomngcipheko omkhulu. Isizathu sokuba bangathathelwa ingqalelo njengomngcipheko omkhulu kungenxa yokuba abanini bamashishini banqwenela ukwakha ishishini labo ngokutyala imali kwinkqubo yokuthenga ngetyala.
Sililungu le-Dun & Bradstreet Credibility Corp.